यसरी गरौँ अदुवा खेती » Khulla Sanchar
यसरी गरौँ अदुवा खेती
साउन २२, २०७३
अदुवाको खेती गर्न प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको बलौटे दोमट माटोको आवश्यकता पर्दछ । अदुवा छहारी भएको तथा सेपिलो ठाउँमा राम्रो उत्पादन हुने हुँदा सोही अनुसारको ठाउँको छनोट गर्नु पर्दछ । अदुवा मुख्य गरी २ किसिमका हुन्छन् जसलाई नसे र बोसे भनिन्छ । जसमध्ये बोसे जातको अदुवा व्यावसायिकरूपमा बढी महत्व भएको पाईन्छ । कपुर कोट १ नामको बोसे जातको अदुवा बढी फल्ने र धुलो बनाउँदा पनि बढी निस्कने भएकोले बजारमा यसको राम्रो मूल्य पाइन्छ ।
अदुवा खेतीे लगाउने समय र बीउको दर
अदुवा खेती लगाउन फागुनदेखि चैत्र महिना उपयुक्त समय मानिन्छ । तर पहाडी भेगमा जेठको दोस्रो हप्तासम्म पनि अदुवा लगाउन सकिन्छ । अदुवा खेती गर्न एक रोपनी अर्थात् डेढ कठ्ठा जग्गाको लागि ठूलो गानो हुने अदुवा जात हो भने ३०० के.जी. र सानो गानो हुने अदुवाका लागि २०० के.जी. बीउको आवश्यकता पर्दछ ।
गानो कुहिने रोग व्यवस्थापन गर्न तथा राम्ररी एकनासले अदुवा उम्रन अदुवा रोप्नु अघि २ ग्राम साफ वा ब्लाइटक्स ५० प्रतिलिटर पानीका दरले झोल बनाउने र त्यस झोलमा बीउ अदुवाको गानोलाई आधा घण्टासम्म डुबाइ राख्नु पर्दछ । अदुवाको गानोलाई आधा घण्टा डुबाईसकेपछि बीउलाई छहारी वा छायाँमा सुक्न दिनु पर्दछ । यसरी सुके पछिको बीउ रोप्नका लागि तयार हुन्छ । एकपटक बनाएको झोल विषादीमा बढीमा २ पटक मात्र बीउ उपचार गर्नु पर्दछ । त्यस पछि फेरी नयाँ घोल तयार गरी बीउको उपचार गर्नु पर्दछ । यसरी उपचार गरिएको बीउलाई अन्य वस्तुसँग मिसिन नदिइ तयारी जग्गामा रोप्नु पर्दछ । बीउका लागि ४०—६० ग्रामको गानो आवश्यक पर्दछ ।
अदुवा खेतीका लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन
अदुवा बाली माटो मुनी फल्ने हुँदा खुमे्र कीरा र रातो कमिलाबाट हुने नोक्सानी कम गर्न अदुवा लगाउनु भन्दा पहिले २ देखि ३ पटक राम्ररी खनजोत गर्नु पर्दछ । अदुवा रोप्दा पानीको निकास मिलाइ २० देखि ३० से.मि. अग्लो डयाङ् बनाइ बीउ रोप्नु पर्दछ ।
जग्गा तयारीको अन्तिम खनजोतमा प्रतिरोपनी १५०० के.जी. गोबर मल, डि. ए. पि. १५ के.जी., पोटास १२ के.जी. र जिङ्क १ के.जी.का दरले माटोमा मिलाउनु पर्दछ । तर युरिया मल शुरुकै अवस्थामा प्रयोग गर्नु हुँदैन । बीउ लगाउँदा बोटदेखि बोट र लाइनदेखि लाइनको दुरी ४० से.मि. को फरकमा हुनु पर्दछ । अदुवाको गानो रोप्दा १० से.मि. को गहिराइमा टुसा एकैतिर फर्काइ रोप्नु पर्दछ । अदुवा रोप्ने बित्तिकै रोपेको ठाउँमा पात पतिङ्गर वा सोतरले ८ देखि १० से.मि. बाक्लो हुनेगरी छाप्रोको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसरी छाप्रो दिनाले झारपातको प्रकोप घट्ने र लामो समयसम्म माटोको चिस्यान रहिरहने हुन्छ । अदुवाको बीउ उम्रिएको ३० देखि ४५ दिन वा १ महिना पछि ६ के.जी. युरिया मल प्रतिरोपनी वा ४ के.जी. प्रतिकठ्ठाको दरले राखी गोडमेल गर्नु पर्दछ । पूनः ९० देखि १०० दिनमा वा ३ महिना पछि दोस्रोपटक झारपात हटाइ ६ के.जी. युरिया मल प्रतिरोपनीका दरले राखी गोडमेल गर्नु पर्दछ ।
स्वस्थ बिरुवा र उत्पादकत्व बढाउन भिटामिन तथा सूक्ष्म मलखादको प्रयोग गर्नु पर्दछ । बिरुवा कमजोर देखिएमा एटोनिक ३ थोपा प्रतिलिटर पानीमा मिसाइ ३ देखि ४ दिनको फरकमा २ पटक छर्नु पर्दछ । गाई÷भँैसीको पिसाब सङ्कलन गरी ७ दिनसम्म कुहाएर एक भाग पिसाबमा ५ भाग पानी मिसाइ १५ देखि २० दिनको फरकमा छर्नाले बाली राम्रो हुने तथा रोग कीराको प्रकोप कम हुने गर्दछ ।
अदुवा खेतीको गोडमेल र सिँचाइ व्यवस्थापन
अदुवा बालीको उत्पादन राम्रोसँग लिन गोडमेल तथा सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । अदुवा कम्तीमा ३ पटक गोडाई कार्य गर्नु पर्दछ । पहिलो गोडाई कार्य रोपेको ३० देखि ३५ दिन पछि, दोस्रो गोडाई रोपेको ६० देखि ६५ दिनपछि र तेस्रो गोडाई अदुवा रोपेको ९० देखि ९५ दिन पछि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अदुवाको गानो ठूलो भएमा श्रावणदेखि भाद्र महिनामा पुरानो गानोको एक भाग निकालिन्छ, जसलाई ब्रुनी निकाल्ने भनिन्छ । अदुवालाई सुख्खा मौसममा रोपिने भएकोले गर्मी मौसममा सिँचाइको आवश्यकता पर्दछ । माटो सुख्खा देखिएमा पानी नजम्ने गरी आवश्कतानुसार सिँचाइ गर्नु पर्दछ । यदि सिँचाइको उपलब्धता छ भने गोडमेल गरी थप मल दिइसके पछि हल्का सिँचाइ दिनु पर्दछ । यसो गर्नाले माटोमा भएको खाद्यतत्व प्राप्त गर्न योग्य अवस्थामा पु¥याउन सहयोग गर्दछ ।
अदुवा खेतीमा लाग्ने रोग कीरा र तिनको व्यवस्थापन
अदुवालाई माटो मुनी बस्ने मुख्य गरी खुमे्र कीरा र रातो कमिला, धमिरा आदिले नोक्सान गर्दछन् । यी कीराहरु देखिनासाथ गाई/भँैसी वा अन्य जनावरहरुको पिसाब सङ्कलन गरी ७ दिनसम्म कुहाएर १ भाग मूत्रमा ३ देखि ४ भाग पानीमा मिसाएर बोटको फेद वरिपरि माटो भिज्नेगरी छर्नु पर्दछ । माटोमुनी हानिकारक कीराहरु देखिने बित्तिकै डर्सवान वा मालाथियान धुलो नामका रासायनिक विषादीको झोल २ एम.एल. प्रतिलिटर पानी वा १ के.जि. प्रतिरोपनीका दरले बिरुवाको फेद वरिपरि माटोमा छर्नु पर्दछ ।
अदुवा बालीमा बोटको पातको टुप्पोबाट पहँेलिदै जाने, पातसँग जोडिएको डाँठ पानीले भिजेको जस्तो भएर गीलो हुँदै जाने र बिरुवा तान्दा सजिलै पातसँग छुट्टिएर आउने आदि जस्ता लक्षणहरु देखा परेमा गानो कुहिने रोग लागेको थाहा पाउनु पर्दछ । गानो कुहिने रोग लाग्नु पहिले नै सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । रोग लागेको जमिनमा पुनः अदुवा लगाउनु हुँदैन र उपयुक्त घुम्ती बाली अपनाउनु पर्दछ । गानो उम्रिएको ७ देखि १० दिन भित्र २ ग्राम साफ वा राइनो एम. ४५ विषादी प्रतिलिटर पानीका दरले मिसाएर बेर्नाको फेद वरिपरी माटो भिज्ने गरी बेलुकी पख छर्नु पर्दछ । तर वर्षा शुरु भएपछि मात्र यो विषादी हाल्नु पर्दछ । पातमा थोप्ला÷थोप्ला देखिएमा पातको थोप्ले रोग लागेको हुन सक्दछ । यस्तो रोग देखिनासाथ साफ वा किसान एम. ४५ को ३ ग्राम प्रतिलिटर पानीका दरले छर्नु पर्दछ । यो विषादी श्रावण र भाद्र महिनामा २ पटक छर्नु पर्दछ । मिश्रित बालीमा यो रोगको प्रभाव कम रहन्छ । अदुवामा लाग्ने रोग कीरा नियन्त्रणका लागि उपचार गरेको बीउ मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
अदुवा बाली भित्र्याउने र बजार व्यवस्थापन
अदुवा बाली रोपेको ७ देखि ९ महिना पछि खन्नु पर्दछ । अदुवा खन्नु भन्दा १ हप्ता अगाडिदेखि सिँचाइ गर्नु हुँदैन । खन्ने बेलामा सिँचाइ गरेमा गानो कुहिने सम्भावना हुन्छ । अदुवा खन्नु भन्दा अगाडि जमिन माथि देखिएको हरियो भाग ७ देखि १० दिन अगाडि काटेर हटाइदिनु पर्दछ । जसले गर्दा भण्डारणको आयु लामो हुने गर्दछ । अदुवा खनि सकेपछि राम्रोसँग सफा गर्नु पर्दछ र जराहरु कैँचीले काटेर हटाउनु पर्दछ । यसैगरी चोटपटक लागेको र गानोको आकार अनुसार छुट्टयाएर राख्नु पर्दछ । जसलाई स्तरीकरण वा ग्रेडिङ् भनिन्छ । गे्रडिङ् गरिसके पछि क्युरिङ्का लागि छहारीमा केही समय छोड्नु पर्दछ । जसले गर्दा भण्डारनको आयु बढाउन सकिन्छ । अदुवा गे्रडिङ् गरिसके पछि जुटको बोरामा प्याकिङ् गर्नु पर्दछ तर यसलाई प्लाष्टिकले बोरामा प्याक गर्नु हुँदैन । यदि यसो गरेमा अदुवा गुम्सिएर बिग्रने डर हुन्छ । व्यवस्थापन राम्रो भएमा एक रोपनी जग्गामा कपुरकोट— १ जातको अदुवाले १००० देखि १५०० के.जी. सम्म उत्पादन दिन सक्दछ ।